Ahlan Wasahlan: Taratasim-baovaon’ny Global Voices Lingua · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2019 3:27 GMT
Ry namana fiarahamonina Lingua,
Ahlan Wasahlan, na tongasoa (hoy ny teny Arabo) ny taratasim-baovao Lingua. Ity no fotoana voalohany anaovako taratasim-baovao toy izao, koa antenaiko fa miaraka amiko ianao. Mamelà ahy hampahafantatra ny tenako raha mbola tsy mahafantatra ahy ianao. Mohamed ElGohary no anarako ary miasa ao amin'ny Lingua aho.
Nandritra ny taona maromaro, niasa mba hitady fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ireo mpandika teny ao amin'ny fiarahamonina mahafinaritra GV aho. Niditra tamin'ny sehatra samihafa, tetikady samihafa. Fantatro fa mety ho mankaleo ny fomba hanehoako ny vaovao amin'ny alalan'ny lahatsoratra, noho izany dia nieritreritra ny hanao taratasim-baovao tahaka ny tantara aho amin'izao fotoana izao.
Tantara iray isam-bolana izay mitantara aminao ny zava-mitranga ao amin'ny Lingua, ny hevitra tiako zaraina aminao, ary ny zavatra tena manan-danja indrindra, ka mampahafantatra anao fa afaka manao izany koa ianao! Zavatra iray mampitombo ny fitiavako ny fandraisana anjara amin'ny GV ianao, ny Fiarahamonina Lingua. Miharihary tokoa ny mampiavaka anareo sy ny maha-samihafa anareo sy ny mampitovy anareo.
Lingua nandritra ny GV Summit tany Colombo, Sri Lanka
Tena sarobidy amiko ianao, nomenao fahafaham-po aho tamin'ny fidiranao, ary tena zava-dehibe ho ahy izany! Amin'ny maha-introverti (tsy miresaka loatra) ahy, antony lehibe iray tamin'ny fomba nanokafako miadana sy mbola nanokafako ny saiko ho an'izao tontolo izao ianao, ary ny fomba nanokafako ny tenako amin'ny olona azoko resahina tsy misy fitsaratsarana na fanesoesoana. Manantena aho fa hampisy traikefa mahafinaritra kokoa ity taratasim-baovao ity, mba hahafantaranao ahy bebe kokoa sy hahafantarako anao bebe kokoa.
Noho izany, miverina amin'ny tantara 🙂 Vao tamin'ny taona 2014, taorian'ny fivoriana maro niarahana tamin'ny mpikambana GV sy ireo adihevitra momba ny paikady, dia manana ny Community Blog isika ankehitriny. Mizara ny tantaran'ny fihaonana manerana izao tontolo izao isika, mamoaka tatitra sy vaovao farany, maneho ny hevitsika, ary koa mankalaza mihitsy aza! Te-hamaky ny avy aminareo tsirairay avy aho 🙂
Fanombohana ho amin'ny volana maro ho avy ity taratasim-baovao ity. Manantena aho fa ho tsara kokoa ho anao hatrany, fa tsy hoe tsara fotsiny. Satria mendrika ny zava-drehetra mahafinaritra eo amin'ny fiainana ianao, ho an'ny fiahianao, ny fanoloran-tenanao, ny fotoana sy ny herinao, amin'ny fampiasanao ny tenanao. Manantena aho fa tsy hanakivy anao.
Farany, ampahafantaro ahy raha tsy manana kaonty ao amin'ny bilaogin'ny fiarahamonina ianao. Raha tianao ity taratasim-baovao ity, dia asao misoratra anarana ny namanao GV'er!
Hery ho an'ny Lingua!